Marka qorayaashu ku xiran yihiin bulshadooda
Hadafka Press House waa in la daabaco qoraalo xiiso leh, muhiim ah, oo joogtaynaya waqtigeena; inay ku farxaan kuna dhiirrigeliyaan akhristayaasha; si ay uga qaybqaataan nolosha dhaqanka bulshadeena; iyo in lagu kobciyo hidaha iyo suugaanta suugaaneed. Iyada oo taageero ka heleysa Xarunta McKnight Foundation, Aqalka Coffee Press wuxuu ku dhisan yahay caadooyinka ugu wanaagsan ee daabacaadda iyo farshaxanka buugta, soo saarista buugaagta u dabbaaldega malaysiga, hal-abuurka qoraalka qoraalka, iyo codadka asaliga ah ee khibradda Maraykanka.
Hadafka McKnight ee taageeridda farshaxanada shaqada si loo abuuro loona hormariyo bulshooyinka firfircoon waxay la jaanqaadaan daabacaadda Kibiska iyo mashaariicda bulshada. Mid ka mid ah mashaariicdooda waa CHP ee Istaraatiijiyada. Kusoo dhawaaday Maktabada Mashruuca "Incubator Project", barnaamijkan degganaanshaha buugaagta ayaa dhigaya qorayaasha ku yaala aqalka dadweynaha, iskuulada, iyo maktabadaha takhasuska leh si loo abuuro shaqaale u shaqeynaya oo dhiirigelin doona dadweynaha ballaaran si ay ula shaqeeyaan maktabadaha degaanka ee siyaabo cusub iyo kuwo macno leh, iyo inay dhiiri galiyaan farshaxanno iyo dadweynaha guud ahaan Ka fikir maktabadaha sida goobaha hal-abuurka ah.
"Waxay igu soo celisay taariikhdayda - taariikhda LGBT dhaqanka iyo siyaasadda. Isla markiiba riwaayad waa horay iyo xarun ma ahan oo keliya maskaxdayda, laakiin warqad. " -GREG HEWETT
Badanaa, degaanadaani waxay u huriyaan nolosha hal-abuurka ah ee qoraayaasha habab cusub oo aan la filayn. Marka Gabayga Gabay Hore Greg Hewett (madow, 2010) oo kaashanayey Maktabadda Quatrefoil (oo ah hadafkiisu yahay inuu ururiyo, dayactiro, dukumeentiyo, iyo wareejiyo qalabka GLBTQ meel nabadgelyo leh oo la heli karo), ayaa ururinta ku dhiirrigelisay inuu sii wado shaqada sii wata shay la daabacay. "Waxay igu soo celisay taariikhdayda - taariikhda LGBT dhaqanka iyo siyaasadda. Isla markiiba riwaayad waa horay iyo xarun ma ahan oo kaliya maskaxdayda, laakiin warqad. "
Bishii Abriil 2015 qoraaga 'Coffee House' ee Kao Kalia Yang (Latehomecomer: Qoraalka Qoyska ee Hmong, 2008) waxay degenayd maktabadda St. Paul ee laanteeda cusub ee loo yaqaan 'The Sun Ray' si ay u abuurto shaqooyin cusub oo naqshadaysa barnaamij dadweyne si dib loogu soo celiyo deriskooda maktabadda cusub. Yang wuxuu wax ka qabtaa khibradda dadka soogalootiga ah wuxuuna caawiyaa fududaynta sheekada labadaba bogga. Inta lagu guda jiro muddada degenaanshaheeda, waxay isticmaali doontaa buugaagta, bannaanka, iyo bulshada ee Sun Ray si ay u sii horumariso farshaxankeeda sida qoraaga iyo sheekada.